トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Emihle nemibi sasemakhazeni pachinko we isilinganiso ukuguqulwa
Lapho uya pachinko futhi slot, ngicabanga kuqala ukuthi isilinganiso ukuguqulwa ukukhathazeka. Common e sasemakhazeni pachinko, inani ibhola lapho njengokukwethembisa kwakhe, utsheleke amakhasimende, omunye 4 yen, isibe olulodwa 20 yen indondo. Eminyakeni yamuva, Ichipachi futhi 5 yen slot, njll, kodwa waphuma ngisho ongaphakeme loan ibhola, isilinganiso ukuguqulwa ngesikhathi imali ibhola kanye izindondo ekhishwe Kunoma ikuphi, baba yinto enhle kunqunywa ngesihle pachinko ngamunye wamakhaza onayo.
imali ngesilinganiso, uyinto kubaluleke kakhulu ekunqumeni izinqubomgomo yokusebenza ukuze eshintsha pachinko. Ngo
, ezitolo ephezulu cashing futhi ephansi wokusetshenziswa kwemali yensimbi esitolo, imodeli efakwe nokulwa uhlangothi, njll, sifuna ukubona ukuthi hlobo luni umehluko khona. Njengoba ikhasimende, ngicabanga yebo nabantu yemali okusezingeni eliphezulu limnandi, iqiniso lokuthi esikhundleni wenkokhelo yakho ngesikhathi okusezingeni eliphezulu ukuguqulwa ratio, ngoba esitolo, ngaphandle ngaphezulu iqoqo ngeke kumele.
kusukela yi ibhizinisi evamile, nail kuba kokuqina bavame, kulungiselelwa ngokuvamile futhi crap zonke-1. Ngisho nalapho izenzakalo, kanye nekuvula izipikili ezinkulu phezulu lapho, futhi kwenza kube nzima ukwandisa ukulungiselelwa Lesisemkhatsini, ingasaphathwa kulungiselelwa okusezingeni eliphezulu. Pachinko emakhazeni we imali okusezingeni eliphezulu, lapho kancane abanganaki, mina angeke wakhipha ukunakekelwa njalo kuzodlula ngokushesha ube kusilela.
Kafushane, ngoba kunzima kakhulu ukukhombisa wenkokhelo, uma ubheka ezivela kumakhasimende ethu, futhi ngicabanga eziningi abengeke akwazi ukushiya Toka angabuyeli. Ngakho-ke, ngo-wamakhaza pachinko we imali ephezulu, sivamile ukuthenga ukuthi ikakhulukazi usethe eziningi model ngokuthi le ephezulu Spec. Big hit okungenzeka kuphezulu, utshalomali Kulindeleke isamba esikhulu semali.
Nokho, ngisho lapho libhekwa ohlangothini ikhasimende, ephezulu Spec ephezulu wokusetshenziswa kwemali yensimbi esitolo, kuholela kokuwina okukhulu Uma amazwe ibhola. Pachinko emakhazeni ka abahlengiwe okusezingeni eliphezulu, futhi okwandisa Imali encane, eqinisweni, ematfuba uwine okungenzeka ukuthi waphinde wasimama ngokusesilinganisweni, okusezingeni eliphezulu ngawe. Kusekhona, is inzuzo enkulu yemali okusezingeni eliphezulu. Uwine uyazi, uma hit, wukuthi kungcono ukulwa kude e wamakhaza pachinko yemali okusezingeni eliphezulu.
noHezekeli, ongaphakeme-wokusetshenziswa kwemali yensimbi esitolo, ngokuvamile Lokho nail senziwa omuhle ovela futhi, kungase noma kukhona isethi Lesisemkhatsini embobeni. Njengoba ijubane uhola, ayanda amathuba ukudweba big hit. Nokho, ngisho njengoba eziningi wenkokhelo wokutholakala, kuye ngokuthi utshalomali isamba semali, nawe yokuthi onqobayo ambalwa. Ngo cash ezifana eliphansi pachinko emakhazeni, ukudlala lula imodeli okuyinto kuthiwa amnandi digital futhi phakathi uhlobo specs, ithambekele ukufaka eziningi kuyoba ephakeme.
, uma yokuthi ufuna ukudweba big hit, kodwa pachinko emakhazeni yemali ongaphakeme Kunconywa, ngicabanga ukuthi kunzima ngempela ukunqoba enkulu. Esikhathini okusezingeni eliphezulu imali esitolo, kokuwina okukhulu ibizwa ikhasimende got me ukunambitha ukuhlangabezana, esitolo ephansi wokusetshenziswa kwemali yensimbi, libhekene ucingo ikhasimende ebuzwa ukunambitha phakathi ukuthuthukiswa ukudlala into.
Ngale ndlela, ukuguqulwa ratio kungenxa umehluko indlela ukudlala, uye ezitolo futhi washintsha ukukhetha.
exchange okulingana, sizindza lesicinile nge high ukuguqulwa ratio esitolo, kuyinto ekahle ukuthi sihlose kuphela iphinikhodi iphuzu isikhathi esihle. Ukwehlisa isilinganiso ukuguqulwa, kodwa lo mkhuba ngokuthi lonke zokugcina, abaningi ezifana siyilungiselelo Lesisemkhatsini, bavame ukuba efakwe ukuthi ubuvila. Isikhathi akayena ezingenanzuzo kakhulu naphezu kokuhlupheka, ke uyoba njengomvini - ukuba ngingaze e amabhayithi Izisebenzi suku. Ngenxa umehluko ohlangothini ubuhle, futhi kushintshile esitolo ukukhetha.
exchange okulingana, sizindza lesicinile nge high ukuguqulwa ratio esitolo, kuyinto ekahle ukuthi sihlose kuphela iphinikhodi iphuzu isikhathi esihle. Ukwehlisa isilinganiso ukuguqulwa, kodwa lo mkhuba ngokuthi lonke zokugcina, abaningi ezifana siyilungiselelo Lesisemkhatsini, bavame ukuba efakwe ukuthi ubuvila. Isikhathi akayena ezingenanzuzo kakhulu naphezu kokuhlupheka, ke uyoba njengomvini - ukuba ngingaze e amabhayithi Izisebenzi suku.